Sidee shaqo looga helaa Iceland? - ALinks
Sidee shaqo looga helaa Iceland?
June 2, 2021 Maitri Jha shaqo
Ilaha shaqada ee internetka
Kuwani waa qaar ka mid ah boggaga ugu caansan ee shaqo raadinta Iceland:
Nooca barnaamijkan ee degelku si fiican ayuu u shaqeeyaa, isagoo taxay shaqooyin kala duwan, badankooduna ku jiraan Icelandic oo in yar oo Ingiriis ah ku jiraan. Si aad uga codsato shaqooyinka barnaamijka, soo rar CV-gaaga iyo macluumaadkaaga shaqsiyeed.
Meelaha badankood waxay kujiraan Icelandic umana baahna shahaado jaamacadeed.
Ayuub yahay :
Fursado badan oo furitaan xirfadeed ayaa la heli karaa. Maaddooyinka ugu badan waxay ku jiraan Icelandic.
Waa mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan Iceland waxaadna ka heli kartaa dhajinta shaqooyinka.
Websaydhkani wuxuu hayaa garaaca luqadda Ingiriisiga ee ku saabsan bilaabista Icelandic, hal-abuurnimada, iyo wararka maalgashiga. Waxa kale oo jira shaqo furitaan waqti ka waqti.
Magaalada Reykjavik :
Inta badan daryeeleyaasha, xanaanada carruurta, la shaqeynta dadka naafada ah ama howlgab ah, macallimiinta, waxbarashada gaarka ah, shaqaalaha caafimaadka, iyo jagooyinka la midka ah. Maaddooyinka ugu badan waxay ku jiraan Icelandic.
Dhajinta shaqooyinka waaxda dadweynaha ee dhakhaatiirta, macalimiinta, iyo shaqaalaha maamulka, iyo waxyaabo kale. Maaddooyinka ugu badan waxay ku jiraan Icelandic.
Adeegyada shaqaalaynta ayaa had iyo jeer mas'uul ka ah nidaamka shaqaalaynta ururada waaweyn ee Iceland, doorar badan oo aan la dhajin. La xiriirida ururadan si loo hubiyo inay leeyihiin wax furitaan ah oo u dhigma aqoontaada waxay noqon kartaa habka ugu fiican. Waxay yaqaanaan gudaha iyo dibedda suuqa waxayna badanaa leeyihiin shabakad xiriir oo ballaaran.
Geko | STEAM (shaqooyinka sayniska, teknolojiyadda, injineernimada, farshaxanka iyo xisaabta meelaha)
Wakaaladda Swapp (Loo-shaqeeyaha Diiwaanka Diiwaanka)
EURES waa bog shaqo oo yurubiyan ah. Waxay leedahay liis gareyn shaqo kumanaan boos.
Ma fududahay in shaqo laga helo Iceland?
Ku noolaanshaha Iceland iyada oo aan la helin shaqo mushahar ah maahan oo kaliya adag, laakiin sidoo kale waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn, gaar ahaan ajaanibta aan lahayn cilaaqaadka iyo fahamka aasaasiga ah ee dhaqaalaha Iceland.
Sidee ajnabi shaqo uga heli karaa Iceland?
Si looga shaqeeyo Iceland, ajaanibta aan u dhalan wadamada EU / EEA waa inay codsadaan ogolaansho shaqo iyo degenaansho. Ajaanibta badankood, codsashada rukhsad ku saleysan aqoonta xirfadeed waa ikhtiyaarka ugu fiican.
Shaqooyin noocee ah ayaa looga baahan yahay Iceland?
Daryeelka caafimaadka, dhismaha, IT, iyo warshadaha dalxiiska, gaar ahaan, waxay baahi weyn u qabaan shaqaale. Tan waxaa u sabab ah doorsoomayaal kala duwan, oo ay ku jiraan heerarka naafada ee Iceland oo sii kordhaya iyo horumarinta tikniyoolajiyad cusub oo ka dhakhso badan tan dadku ku baran karaan inay ka faa'iidaystaan.
sida shaqo looga helo IcelandKa shaqeynta shaqo
Sidee shaqo looga helaa Dubai dadka Hindida ah?
Sida Loogu Helo Shaqo DR Congo Oo Kordhinta
Sidee shaqo looga helaa Lubnaan?
Sida Loo Helo Shaqo, Liistada Shaqooyinka Ugu Lacagta Badan Oo Falastiin
Sida Loo Helo Shaqo Dalka Faransiiska
Shaqooyinka iyo Shaqada? Ogow Qaabka Shaqada ee Siiriya!
Sida shaqo looga helo Baxrayn
ALinks waxaa taageeraya Asylum Links, midnimo wadaagaysa macluumaadka ku saabsan safarka iyo ku noolaanshaha dibadda ee qof walba. Qaxootiga waa la soo dhaweynayaa!
Sidee shaqo looga raadsadaa Imaaraadka, Imaaraadka Carabta?
Waxaa laga yaabaa 7, 2019
Ma dooneysaa inaad furato Akoon Bangi gudaha Turkiga ?? Waa tanaa Sidaad Ku Habeyn Karto Iyadoo Fudud
Waqtiga ugufiican ee aad booqatid Dubai- Ogow Kahor Intaadan Qorsheyn Safarkaaga!
Ku soo dhowow Yurub, Hanuun qofkasta hage
Xarumaha Jarmalka Waa inaad Booqataa
Hoteellada ugu Fiican Jarmalka
Bangiga ayaa loogu talagalay Qof kasta, Waxbadan ku samee lacagtaada Mexico
Sidee Loo Dalbadaa Visa To India
Xarumaha Daryeelka Caafimaadka ee Hindiya
Talyaaniga: Sidee loo codsadaa magangalyada caalamiga ah?
Fadlan ku dooro Tab Tusmada Qaybta Waxqabadka.
macluumaadka ku saabsan
Xiriirada Magangalyada fb
Europe ALinks bogga fb
Ameerika ALinks bogga fb
Galbeedka Aasiya iyo Waqooyiga Afrika ALinks bogga fb
Hindiya ALinks bogga fb
West Africa ALInks bogga fb
Koonfurta iyo Bartamaha Aasiya ALinks bogga fb
Bariga, Bartamaha iyo Koonfurta Afrika ALinks bogga fb
Bariga Aasiya iyo Koonfur Bari Aasiya ALinks bogga fb